Grammar 001 (Elementary) 1 year ago
Present continuous tense Present continuous tense ကို ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အက်ရှင် (action) မပြီးမြောက်သေးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ Present continuous tense ကို Progressive tense လို့လဲခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ အခု ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတာလဲ What am I doing? ကျွန်တော် စကားပြောနေတာပါ။ I am taking. I’m talking (short form) ကျွန်တော် စာသင်နေတာပါ။ I am teaching. I’m teaching. (short form) ယခုလောလောဆယ် လုပ်နေဆဲကာလဖြစ််ပြီး မပြီးမြောက်သေးတဲ့ (action) ကိုပြတဲ့အခါ present continuous ကိုပဲသုံးပါတယ်။ ဥပမာလေးတွေဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ I am reading right now. ကျွန်တော်အခုစာဖတ်နေပါသည်။ Jason is studying at the moment. ဂျေဆင် ကအခုလတ်တလော စာလေ့လာနေပါသည်။ (လောလော လုပ်နေတာဖြစ်ပြီး မပြီးမြောက်သေးပါ၊ လုပ်နေဆဲ၊ လေ့လာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။) ဒီနေရာမှာတော့ Present continuous တွေဟာ Verb to be နဲ့ Ving ပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြုလုပ်သူကိုကြည့်ပြီး Verb be တစ်ခုကိန်း၊ အများကိန်းကို ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Sub be + ving right now I am working right now He/She/It is sleeping right now We/You/They are crying right now Positive Negative I am watching TV I am not watching TV I’m… I’m not watching TV She is talking on the phone. She is not talking on the phone. She’s… She’s not talking on the phone. We are going to school. We are not going to school. We’re… We’re not/ We aren’t going to school. ဥပမာလေးတွေဆက်ကြည့်ရအောင် ယခုလောလောဆယ်လုပ်နေတယ်၊ မပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့ action တွေအတွက် Present continuous ကိုသုံးပါမယ်။ Be+ ving I am doing homework now. I’m She is working on her computer right now. She’s They are walking on the street at the moment. They’re လောလောဆယ်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ငြင်းချင်တဲ့အခါ Be + not + ving I am not doing homework now. I’m not doing homework now. She is not working on her computer right now. She’s not/She isn’t working on her computer right now. They are not walking on the street at the moment. They’re not/They aren’t waling on the street at the moment. Present continuous tense ကို မေးခွန်းပြောင်းချင်တဲ့အခါ Be + Sub + ving …? (သလားမေးခွန်း) Yes/No Questions I am studying right now. Am I studying right now? Yes, I’m. No, I’m not. She is eating dinner now. Is she eating dinner now? Yes, she’s. No, she isn’t. They are running now. Yes, they are. No, they aren’t. Yes/No မေးခွန်းမဟုတ်ဘဲ သတင်းအချက်လက်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းချင်တဲ့ Wh question တွေနဲ့မေးတဲ့အခါ။ I am sitting there. ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာထိုင်နေသည်။ Why are you sitting there? မင်းဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာထိုင်နေတာလဲ။ Where are you sitting? မင်းဘယ်နေရာမှာထိုင်နေတာလဲ။ Who is sitting there? အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေတာဘယ်သူလဲ။ He is going to school. သူကျောင်းသွားသည်။ Why is he going to school? သူဘာကြောင့်ကျောင်းသွားတာလဲ။ Where is he going? သူဘယ်ကိုသွားတာလဲ။ Who is going to school? ဘယ်သူကျောင်းသွားတာလဲ။ Notes/ present continuous ကို လောလောဆယ်လုပ်နေဆဲ မပြီးပြတ်သေးသော အက်ရှင်တွေအတွက်သုံးသည်။ သလားမေးခွန်းများကို be verb တွေနဲ့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမေးသောမေးခွန်းများကို wh question များနဲ့မေးနိုင်သည်။
Listening 001 (Beginner)2years ago
This isasack. This isasnack. I pack my snack in the sack. I put the sack in my backpack.
I had never hadahat. I wanted one. So, I told my dad. He said he was glad to get me my first hat. When I saw it, I was mad. It wasabad hat. I did not like it. I put it in the water.
ဘယ်လိုတွေမှားသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်ကို ဖျောက်လိုက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုတွေမှန်လာနိုင်တယ်ဆိိုတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို စတင်မွေးလိုက်ပါ။
afraid (verb) - ကြောက်သည်
wrong (adjective) - မှားသော
excited (verb) - စိတ်လှုပ်ရှားသည်
right (adjective) - မှန်သော
Over and Above ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ over နဲ့ above ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာ သုံးနူန်းကြလဲ ဆို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လေ့လာသူတွေဟာ over နဲ့ above အသုံးပြုမှုတွေပေါ်မှာအနည်းငယ်ရူပ်ထွေးတတ်ကြပါတယ်။ဒီတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာအတူတူလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ Over - Movement
prefix over ကိုစာကြောင်းတွေမှာသုံးတဲ့အခြေအနေလေးခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက
့အခါ လူပ်ရှား မှုကိုပြတဲ့စာကြောင်းတွေမှာ သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။
The clouds moved over the city.
တိမ်တိုက်တွေက မြို့ရဲ့အပေါ်မှာရွေ့လျားခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခါ အရေအတွက်များပြားတာကိုပြောချင်တဲ့အခါ Over 100 people came to the party.
လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ပါတီပွဲကိုလာခဲ့သည်။
ဒီနေရာမှာ over ကိုသုံးလိုက်တာက အရေအတွက်များပြားတာကိုပြောချင်တဲ့အခါ ပိုများတာကို
ပြောချင်တဲ့အခါသုံးပါတယ်။ သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က more than လိုပါပဲ။ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ ဖုံးချင်တဲ့အခါ၊ တစ်ခုခုကို ဖုံးကာချင်တဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ Putahand over your mouth when you cough.
မင်းချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ကာပါ။ There isacloud over the South of Shan State.
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင်တိမ်ဖုံးနေသည်။ နောက်တစ်ခုကတော့စကားလုံးတွေရဲ့ ရှေ့ပေါင်းအနေနဲ့သုံးပါတယ်။ prefix overweight ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ပုံမှန်ထက်အလေးချိန်များနေတာကိုဆိုလိုပါတယ်။
overage ဆိုရင် အရွယ်လွန်သော
overbalance ဆိုရင် ပိုလေးသော
ဒါကြောင့် over နဲ့ရှေ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေကို too ဖြစ်တယ်၊ အလွန်အမင်းဖြစ်တယ်လို့ယေဘုံယျအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။ Above ကိုတော့ပြင်ညီတစ်ခု ပေါ်မှာရှိနေပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ထက်အောက် တည့်တည့်မကျတဲ့အခါမှာ above ကိုပဲသုံးပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ရေကန်ရဲ့အထက်တည့်တည့်မှာရှိနေတာမဟုတ်ဘဲ ရေကန်အထက် ဝန်းကျင်နားမှာလို့ပြောချင်တာ
ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တည့်တည့်မကျတဲ့အခြေအနေတွေမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ above ကို နိူင်းယှဉ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုထက် မြင့်တဲ့နေရာတစ်ခုကို ရည်ညွန်းချင်တဲ့အခါမှာလဲသုံးပါတယ်။ Captain is aboveasergeant.
ကပ်ပတိန်သည် တပ်ကြပ်အထက်တွင်ရှိသည်။ ဥပမာ ရာသီဥတုအပူချိန်တစ်ခု သုညအပူချိန် (သို့) ပျှမ်းမျှ အပူချိန် နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အခါမှာလဲသုံးပါတယ်။
above sea level, Yangon is situated at elevation 30 meters above sea level.
ရန်ကုန်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၃၀ မီတာအမြင့်တွင် တည်ရှိသည်။
သုညအထက် သုံးဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ ဒီနေ့လေ့လာခဲ့ကြတာကတော့ over နဲ့ above ရဲ့အသုံးပြုမှုတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။